October 8, 2020 - Online Hartha
ဆီပူ၊ မီးပူလောငျဖွဈခဲ့လြှငျ အမာရှတျတှေ မရှိရအောငျ ခကျြခွငျးဖွရှေငျး လို့ရမညျ့ အလှယျတကူ နညျးလမျးကောငျးမြား
October 8, 2020 by Online Hartha
ဆီပူ၊ မီးပူလောင်ဖြစ်ခဲ့လျှင် အမာရွတ်တွေ မရှိရအောင် ချက်ခြင်းဖြေရှင်း လို့ရမည့် အလွယ်တကူနည်းလမ်းကောင်းများ ဆီပူလောင် ရေနွေးပူလောင် ဆေးနည်းများ ( ၁ )ကြက်ဥ ပြုတ်ပီး အကာကိုဖယ်ပါ ။ အနှစ်ကို ဒယ်အိုး သန့်သန့်နဲ့ မီးအပူ ပေးလှော်ပါ ။ အရည် ပျော်အောင်ထိပေါ့ အရည်ပျော်လာရင်ဆီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မည် ၎င်းကိုအနာမှာ လိမ်းပေးကြပါ။ ကျနော် လက်တွေ့သုံးခဲ့ဘူးတာ မီးလောင်ဒဏ်ရာတောင် ပျောက်တယ် ။အမာရွက် လို့တောင်မရှိဘူး နဂိုအသားတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီနိုင်တာဆို လို့ ဘာမှမရှိလို့ ဆေးမီးတိုလေး ရေးပို့ပေး ရတာပါ။ မြန်မြန်နေပြန်ကောင်း ကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ( ၂ )ကြက်သား၏ အဆီကိုကြော်ထားသောဆီကို အပူလောင် အနာများကိုလိမ်းပေး လျင်လည်း သက်သာပျောက်ကင်းပြီး အနာအမာရွတ်မကျန်ပါ။တကယ်ကောင်းသောလက်တွေ့ဆေးနည်းပါ ။ ( ၃ … Read more
ဒယ်အိုးနီ ဒယ်အိုးပြာ အသုံးပြုသူများ သိထားရမည့် အချက် (၇) ချက်
October 9, 2020 October 8, 2020 by Online Hartha
ဒယ်အိုးနီ ဒယ်အိုးပြာ အသုံးပြုသူများ သိထားရမည့် အချက် (၇) ချက်… မိတ်ဆွေကောင်းတို့ အိမ်အများစုမှာ ဒယ်နီ ဒယ်ပြာ ဒယ်ခရမ်း တို့ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုကြမှာပါ။ အလုံးပေါင်းမနည်း ပျက်လိုက် ဝယ်လိုက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ တန်းသုံးတတ်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေအတွက် အသုံးတဲ့ စေမယ့် အချက်လေးတွေ ကျွန်တော် ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1️. ဒယ်နီအများစု အားလုံးနီးပါးမှာ မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ 2️. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto … Read more
“မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ပါ စကားလက်ဆောင်” မိန်းကလေးတိုင်း လှလှပပလေးနေပါပေါ့ပါးလွှတ်စွာ ဘဝ ကိုရှင်သန်နိူင်ဖို့ပဟုသုတ ရှိမယ့် စာတွေလည်း ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်အားကို ကိုးပြီး အလုပ်လည်းလုပ်ပါ… 💅👠မိန်းကလေးဆိုတာ အလှအပလည်း မက်တယ်ခန္ဓာကိုယ် အလှအပကြောင့် ဘဝ မလှတဲ့ အဖြစ်တော့အမြဲသတိထား စည်းကမ်းရှိရှိနေထိုင်ပါ..။ သန့်ရှင်းမူနဲ့အမြဲတမ်း သပ်ရပ်မူစွာ လှလှလေးနေတတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သပ်ရပ် သန့်ရှင်းမူတွေ နဲ့လှလှပပနေခြင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူတိုးစေပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်လို့အတတ်နိူင်ဆုံး ချိန်ပေးပြီး အသိပညာရစေမယ့်ခွန်အား ရှိစေမယ့် စာပေတွေကို ဖတ်ရူလေ့လာသင့်တယ်။ 📚စာဖတ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လန်းဆန်းစေတယ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မူတွေရှိတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရစေတယ်။ စိတ်နှလုံးသား လှပပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့လာ စေတယ်။ဘဝရဲ့ လောကဓံ ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိူင်စေတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမသားတစ်လောက်နဲ့မတူအောင်စိတ်ဓါတ်တွေလည်း ကြံခိုင်သန်မာလာ စေတယ်။ … Read more
သင် မွေးဖွားခဲ့ တဲ့ အချိန်ကပြောပြတဲ့ သင့် အကြောင်း မှန်မမှန် ဖတ်ကြည့်သွား
အာသီး ၊ရောငျလညျခြောငျးနာ သူမြားအတှကျ နာရီပိုငျးအတှငျး ပြောကျကငျးအောငျလုပျမယျ
အာသီးရောင်လည်ချောင်းနာသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်အောင်လုပ်မယ် ဒီတစ်ခါ အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာ တဲ့ သူတွေ အတွက် နာရီပိုင်း အတွင်း သက်သာာပျာက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အာသီးရောင်ခြင်း ကို (Tonsillitis) လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်း နာရသလဲ ဆိုတော့က ဆောင်းကုန်နွေကူးပြီး နွေအခါရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူဓာတ်များလွန်ကဲပြီး အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာတတ်ပါတယ်။ အခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ရေများများသောက်ပါ။ ဝမ်းမချုပ်ါစေနှင့် အသီးအနှံများများစားသုံးပေးပါ။ အာသီးရောင်တဲ့ လက္ခဏာဟာ အစားအစာများ မြိုချပါက လည်ချောင်းအတွင်း ခံစားရခက်အောင် နာကျင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ပထမ အဦးဆုံး ရေနွေးဖြူထဲသိုိ့ အိမ်သုံးဆား တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်၍ ရောမွှေပြီး ၎င်းဆားရည် (Salt water) ဖြင့် ခေါင်းမော့၍ အာခေါင်အတွင်းရောက်အောင် … Read more
အိမ်ဆောက်နေတုန်းမှာ အုတ်ခဲတွေ လာတောင်းရင် မပေးလိုက်မိပါစေနဲ့
ကျွန်တော့်ကားပျက်သွားလို့ ကားပြင်ဖို့ ဝပ်ရှော့ကို ပို့ထားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး အလုပ်သွားဖို့ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ဘူတာရောက်တော့ ရထားလာဖို့ စောင့်နေတုန်း ဘူတာရုံပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ခွက်လေးတစ်လုံး ရှေ့ချပြီး ငုတ်တုပ်လေး ထိုင်နေတဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက်ကို သတိထားမိလိုက်တယ် …။ သူဟာ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်းပါးပါးကို ဝတ်ထားတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ထမင်းအလွန်ဆာနေပုံ ပေါ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ဟာ သန့်ပြန့်လို့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် မဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တွက်မိတယ် …။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမင်းတစ်ထုတ်ဝယ်ပြီး သူ့ဆီ သွားပေးလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရထားဝင်လာလို့ သူ့ကို စကားမပြောနိုင်ဘဲ လက်ထဲက ထမင်းထုတ်ကို ပေးပြီး ရထားပေါ် အမြန်တက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် … Read more
အရမျးကောငျးတဲ့စာလေးမို့ပါ.. ခြို့တဲ့သူကို ထမငျးတဈလုပျ ကြှေးခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ပွနျပွီး အကြိုးခံစားရ
မဖတ်ရသေးဖတ်ကြည့်နော်အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ပါချို့တဲ့သူကိုထမင်းတစ်လုပ်ကျွေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြန်ပြီးအကျိုးခံစားရခြင်း မဖတ်ရသေးဖတ်ကြည့်နော် အရမ်းကောင်းတဲ့စာလေးမို့ပါချို့တဲ့သူကိုထမင်းတစ်လုပ်ကျွေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြန်ပြီးအကျိုးခံစားရခြင်းကျောင်းနှင့် အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ ထမင်းဆိုင်သေးသေးလေးတစ်ဆိုင်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကထမင်းလာမှာစားတယ်ဆိုင်ရှင်နားကပ်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးနှင့်ဟိုလေသားကိုထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် ရောင်းပေးလို့ရလားခင်ဗျသားပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါရပါတယ်သားရယ် ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆိုင်ရှင်အဒေါ် ကြီးကယောက်ျားရေ ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက်လုပ်ပေးပါဦးအော်ဟင်းချိုနဲ့ငါးပိရည်လည်းထည့်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော် ယောက်ျားဖြစ်သူကထမင်းအဖြူတစ်ပွဲကို ကောင်လေးထိုင်နေတဲ့ခုံမှာ သွားချပေးလိုက်တယ်ကောင်လေးက သူ့ကိုထပ်မှာတယ်ဟိုလေသားအတွက် နောက်ထပ်ဟင်းမပါတဲ့ ထမင်းဗလာ တစ်ထုတ်ထပ်လုပ်ပေးလို့ ရလားခင်ဗျကောင်းလေးခမျာ ပြောသာပြောနေရတယ်သူ့မျက်နှာက အတော်လေး အားနာနေတဲ့ပုံပါရပါတယ် သားရယ်ဒါနဲ့ဒီထမင်းထုတ်က မင်းဘာသွားလုပ်ဖို့လည်း သားညနေကြရင်စားဖို့ပါ ဦး ဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီးက သူ့ကိုဂရုနာသက်တဲ့မျက်လုံးနှင့်ကြည့်ပြီး အင်!ကောင်လေးကြည့်ရတာမြို့မှာသာကျောင်းလာတက်တယ်အိမ်က မိဘတွေ ကငွေကြေးအခက်ခဲ ရှိပုံရတယ်အမှန်တကယ်တော့သူတို့လင်မယားကလည်း တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားပါဒီဆိုင်နေရာလေးကိုသူများငှားပေးလို့သာကံကောင်းပြီးဈေးရောင်းရတဲ့ဘဝပါ… မရှိသူမို့လည်း မရှိသူကိုစာနာတတ်တဲ့စိတ်ကသူတို့လင်မယားမှာရှိပြီးသားပါလေ ဟင်းအိုးမှဟင်းတွေကိုခတ်ပြီးထမင်းများနဲ့သူဖုံးဖိပြီးထည့်နေမိသည် ဒါကို မိန်းမဖြစ်သူကမြင်တော့ရှင်ဘာလုပ်နေတာလည်းကာင်းလေးအတွက် ထမင်းထည့်ပေးနေတာလေအ်ာရှင်ကလည်းတုံးလိုက်တာပေးချင်နေမှတော့ ဝှက်ပြီးပေးစရာလား ဒီအတိုင်းပေးလည်း ရလျှက်သားနဲ့ဘာလဲရှင်ကကျွန်မမြင်မှာ ကြောက်လို့လားကြောက်စရာမဟုတ်တာ ရှင်ကျွန်မလည်း စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့မိန်းမသားတယောက်ပါ ဟာ ဒီမိန်းမဘာတွေလာပြောနေတာလည်း ဒီအတိုင်း ဗြောင်ပေးတော့သူ့ကိုအထင်သေးရာရောက်သွားမှာပေါ့ဟ ပြီးတော့လည်း သူရှက်သွားရင်နောက်ဆို တို့ဆိုင်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးလာရဲတော့မလည်း မိန်းမဖြစ်သူက လင်ယောက်ျားကို … Read more
သင့်ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးကိုသာ ဇနီးလောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပါ….။ အခုခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှာနေကြပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူ ကောင်မလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ လက်ထပ်လိုက်ပါတော့..၊ ၁။ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးရင်..၊ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက လူတွေကိုတောင် ရူးသွပ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရထားရင် ကံကောင်းနေပြီလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်..။ အချစ်ဆိုတာဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မရွေးလိုက်ပါနဲ့..၊ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးပြီး မင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးမျိုး ရထားရင်တော့ … Read more
စီးပှားတကျ မညျ့အိမျ နှငျ့ ရဆေနျ အိမျတို့ဆိုတာ ဒီလိုအိမျမြိုးတှပေါ
စီးပွားတက် မည့်အိမ် နှင့် ရေဆန် အိမ်တို့ဆိုတာ… အိမ် ၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ် သည် မိမိ အိမ်ထက်မြင့်မည် ခြေရင်းအိမ်သည်လည်း မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင် အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။ နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိ မ့်မည် ။ ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ကိုယ့်အိမ်က အလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါက အိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည် ။ လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက် ထား၍ ပြူ စုလုပ်ကျွေးအား သဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည် ။ ကိုယ့်အိမ် ၏ ခြေရင်းက ကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါက အိမ်တောင်တန်း ဟုခေါ်သည် ။ တစ်စိမ့်စိမ့်စီးပွားဖြစ်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်း အိမ်က မြင့်နေပါက … Read more